Myanmar Defence Weapons: Myanmar M2 12.7mm HMG (KaPaSa)
မေမြို့မိုး December 24, 2011 at 7:32 AM
အစ်ကိုMMရေ..။ ကျွန်တော် ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး.
အစ်ကို .. အစ်ကိုပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်..။
ဗျ..။ စက်ကလေး၊ စက်လတ်၊ စက်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်..။
စက်ကလေးက MA-2 စက်လတ်က.MG 42 လိုဟာမျိုးပါ.။
စက်ကြီးကတော့ အစ်ကိုပြထားသလို ဟာမျိုးပါခင်ဗျား..။
MM December 25, 2011 at 8:55 AM
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုရေ ကျွှန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်ဗျာ.. အမှားရှိရင် အခုလိုဝင်ထောက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. နောက်လည်းအမှားတွေရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ..။
whispering shadow October 12, 2012 at 4:32 AM
ဒါ​ကတော့ အမေ​ရိ​ကနျ​နိုငျငံ​က​ထုတျ​ခဲ့​တဲ့ အမျ- ၂ ဘ​ရောငျ​နငျ​စကျ​ကွီး​မဟုတျ​လား? အခု​ထိ​သုံး​နေ​ကွ​တုနျး​ပဲ​လေ။ ၅​၀​ကယျလျ​ဆို​တော့တျောတျော​ကွမျး​ပါ​တယျ​ခငျဗြာ။ လူ​ကို​ထိ​တာ​မွငျ​ဖူး​ပါ​တယျ။ ခါး​ကို​ကညျြ​တ​ခကျြ​သာ​မှနျ​တာ နှဈ​ပိုငျး​တိတိ​ပွတျ​သှား​ခဲ့​ပါ​တယျ။